Hypacrosaurus - အချက်အလက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းများ
by ဘော့ Strauss
Hypacrosaurus ( "လုနီးပါးအမြင့်ဆုံးပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်" အတွက်ဂရိ); Hi-Pack-သမင်ဒရယ်-အနာ-ကျွန်တော်တို့ကိုအသံထှကျ
သည် Cretaceous နှောင်းပိုင်းက (70-65 သန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း)
အကြောင်းပေ 30 ရှည်မှာတန်ချိန်4တန်
Point မောက်; ကျောရိုးကနေထွက်ကြီးထွားလာကျောရိုး
ဒါကြောင့် 1910 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်သည့်အခါ, ဒီဘဲ-ငွေကောက်ခံဒိုင်နိုဆောသာအရွယ်အစား Tyrannosaurus Rex မှဒုတိယစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ကြောင့် Hypacrosaurus ယင်း၏ထူးဆန်း name ကို ( "လုနီးပါးအမြင့်ဆုံးပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်") ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးကြောင့်ကတည်းက herbivorous နှင့်အသားစားနှစ်ဦးစလုံးမြောက်မြားစွာသည်အခြားဒိုင်နိုဆောဖြင့် outclassed ထားပြီးပေမယ့်နာမကိုအမှီကပ်ခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကို Hypacrosaurus အများဆုံးကိုအခြား hadrosaurs နှင့်ကင်းသတ်မှတ်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဥများနှင့် hatchlings နှင့်အတူပြည့်စုံပြည့်စုံ nesting များနမူနာမြေပြင်, (အလားတူသက်သေအထောက်အထားအခြားမြောက်အမေရိကဘဲ-ငွေကောက်ခံဒိုင်နိုဆော, Maiasaura တွေ့ရှိထားပါတယ်) ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်။ ဤသည် paleontologists Hypacrosaurus '' တိုးတက်မှုနှုန်းပုံစံများနှင့်မိသားစုဘဝတွေအကြောင်းအချက်အလက်များ၏မျှတသောပမာဏကိုအတူတူ piece ခွင့်ပြုထားပါတယ်: ဥပမာ, ငါတို့ Hypacrosaurus hatchlings 10 သို့မဟုတ် 12 နှစ်အတွင်းရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအရွယ်အစားမှီသိဝေးရှိရာသို့အလျင်အမြန်ပုံမှန် tyrannosaur ၏ 20 သို့မဟုတ်အနှစ် 30 ထက် ။
အများဆုံးကတခြား hadrosaurs ကဲ့သို့ပင် Hypacrosaurus (အတော်လေးဆို, Parasaurolophus ၏မောက်၏ Baroque ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားမမှီရာ) က၎င်း၏သီး၌အပေါ်ထင်ရှားတဲ့မောက်အားဖြင့်ခွဲခြားခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိစဉ်းစားတွေးခေါ်ဒီမောက်အထီးမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရရှိနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီး (သို့မဟုတ်ဒုနျအလှနျ) အချက်ပြခွင့်ပြု, လေထု၏ပေါက်ကွဲမှုများ funneling များအတွက် resonating device ကိုခဲ့ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သားကောင်တွေကိုချဉ်းကပ်အကြောင်းကိုနွားသတိပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
19 ရာစုထဲကတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းဘယ်တော့မှအဲဒီ 10 ဒိုင်နိုဆော
အဆိုပါ 10 အကောင်းဆုံးဒိုင်နိုဆောစာအုပ်များ
အဆိုပါ 10 အဆိုးဆုံးဒိုင်နိုဆောအမည်များ
ကမ္ဘာမြေရဲ့ 10 အကြီးမားဆုံး Mass မျိုးသုဉ်း
ဆွတ်ခူးဘယ်သူက - ထိုဖုံးကိုဓားရှည်-သွားကျား vs. အဆိုပါစီးပွားရေးနဲ့ Wolf က?
Megalodon - The Monster ငါးမန်းဘဝပုံစံ! (မ)
ယင်းမျိုးစိတ်သစ်၏အမျိုးသမီးပြီးနောက် Named 10 ဒိုင်နိုဆော
Iguanodon vs. Utahraptor - သူကားအဘယ်သူဆွတ်ခူး?
လေး-တစ်နှစ်တာမြောက်ဒါကိုတာကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
ဆန်းစစ်ခြင်း: ချန့်ဟာ Rapper - အရောင်စာအုပ်
ကောလိပ်မှလျှောက်ထားခြင်း, သင်ယခုဖျက်ပစ်ပါသငျ့ပါ Facebook ကိုဓာတ်ပုံများ
ရော့ခ်ဆား မှစ. ဆိုဒီယမ် Chloride သန့်ရှင်းစေလုပ်နည်း
ခွေးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ 40 သန်းနှစ်
Sarah Josepha Hale က
တစ်ဦး Express သို့မဟုတ် Painterly စတိုင်အတွက် Paint လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတ္တု Detector Making မှတစ်ဦးကကလေးများ '' လမ်းညွှန်
2014 ခုနှစ်အတွက်ထိပ်တန်း 10 ကျောင်းဆင်းပွဲသီချင်းများ
တစ်ဦး Thesaurus အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Andrea Palladio - Renaissance ဗိသုကာပညာ
တပ်ဦးဘန်ပါကို Install လုပ်နည်း
သခင်၏ vs. ဂုဏ်ထူးဘွဲ့
စပိန်ကြိယာ '' Hablar '' Conjugate ဖို့သင်ယူပါ
အဆိုပါ Luciferians ၏မျက်လုံးမှတဆင့်စာတနျသမှာတစ်ဦးကမျှော်